в Sheekada Guusha, Wararka gobolka
AgroAlliance-NN waa ganacsade agri-Nizhny Novgorod oo tirinayey wax qabadkiisa tan iyo 2018. Ku takhasusay baradho abuurka ah.
Aagga wax-soo-saarka ayaa ilaa hadda ka badan 100 hektar. Waxsoosaarkooda iyada oo ku saleysan xilli ciyaareedkii hore - celcelis ahaan 30 tan / ha. Horta - qorsheyaasha horumarinta kaabayaasha, horumarinta teknolojiyadda casriga ah, beerista noocyo rajo leh.
Si kastaba ha noqotee, wax badan ayaan kaaga sheegi doonnaa wax walba.
Faa'iidooyinka maxalliga ah
Beerku wuxuu ku yaalaa koonfurta-bari ee gobolka, degmada ku taal degmada Perevozsky, oo 130 km u jirta Nizhny Novgorod. Aagga gobolka looma arko "baradho," laakiin sida laga soo xigtay maamulaha beeraha Dmitry Kabanov, kooxda maareynta waxay leeyihiin sababo ay ku doortaan booskan.
Maanta, dad badani waxay raadsadaan inay baradhada meelkasta ku beeraan- ayaa yidhi Dmitry Kabanov, - laakiin tani waa khalad: dhaqanka ayaa wali muujinaya natiijooyin wanaagsan oo kaliya xaaladaha qaarkood. Gobolka Nizhny Novgorod, sida ugu wanaagsan ee loogu talagalay baradhada soo koraya waa Arzamassky, Shatkovsky, Diveevsky, Gorodetsky iyo Bogorodsky. Maxay yihiin faa'iidooyinkooda? Carrada, carrada sifiican u dhisan; marin u helidda waraabka, beero leh celcelis ahaan 70-100 ha. Xaqiiqdii, inta badan shirkadaha baradhada ee gobolka ayaa ku yaal halkaas maanta; waa adag tahay in la helo dhul bilaash ah oo ku yaal xaafada. Isla mar ahaantaana, degmo kasta oo aan ku jirin liiskan, hal ama laba meelood ayaa sidoo kale lagu garan karaa halka ay ku jiraan dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka u ah abuuritaanka baradho".
AgroAlliance-NN kaliya ayaa leh qalabkan oo kale. Hal mar horaantii 2000-meeyadii, dhulkii loo yaqaan 'Revezen LLC', oo ka mid ah mashaariicdii baradhada casriga ahaa ee ugu weyneyd ee laga hirgaliyo Gobolka Nizhny Novgorod, wuxuu ku yaal dhulkan. Takhasuslayaasha ayaa si taxaddar leh u xushay dhulalka mashruucaas oo aan khalad ahayn. Khibradda AgroAlliance-NN ayaa maanta xaqiijineysa: baradhada halkaan ku jirta ayaa leh tayo aad u wanaagsan.
Jidadka, ka dib dhammaystirka mashruuca 'Revenzen', baradhada ayaan lagu beerin boggan muddo ku dhow toban sano.
Intaa waxaa u dheer, jiritaanka isha biyaha waraabka waxaa loo aanayn karaa iskugeynta degmada magaalada ee loo yaqaan 'Perevozsky' - Webiga Pyana wuxuu ku qulqulaa degmada; Dhibaatooyin la'aan 'gacmaha shaqeeya' - waxaa jira shirkado kooban oo shaqeynaya, degganeyduna waxay xiiseynayaan inay shaqeeyaan; dhaqanka suuban ee masuuliyinta imaatinka maalgashadayaasha cusub.
Iyo dhammaan isla qodobka aan ku bilownay sheekadan: maqnaanshaha beeraha baradho waaweyn ee xaafadaha, taas oo u oggolaaneysa beerta abuurku inay sii wado go'doominta dhulka.
Kaliya waxaa jira sagaal qof oo ka mid ah kooxda xirfadda leh ee AgroAlliance-NN. Midkasta wuxuu mas'uul ka yahay goobtiisa shaqada, mid walbana - mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran sababaha guud. Kama fadhiisan karno qof gadaashiisa, sida ka dhacda xafiisyada magaalada- faallooyinka Dmitry Kabanov. - Wax walba waa la arkayaa ”.
Madaxa shirkada ayaa xusaya in shaqaalihiisu ay shaqeeyaan sanadka oo dhan, waxbadanna ay kuxiran yihiin xirfadooda, u heellanaanta iyo dhiiri gelinta. Marxalad kasta 12 bilood gudahood waad waayi kartaa feejignaanta oo aad khalad sameyneysaa saameyn doonta natiijada ugu dambeysa. Maxaa la sameeyaa si kooxda looga ilaaliyo inay la dagaallamaan niyad xilli xilli kasta? Laga soo bilaabo aragtida Dmitry Kabanov, "Takhasuslayaashu waxay u baahan yihiin in la ammaano, oo mudan in la bixiyo oo la nasiyo", - kuwanu waa saddexda qaybood ee ugu waaweyn ee guusha.
Silsilad ay la galaan macaamiisha
"Waxaan koraan noocyo baradho xilli hore iyo bartamaha badhtamaha, - madaxa AgroAlliance-NN ayaa sii waday sheekadiisa, - loogu talagalay soosaarayaasha beeraha ee gobollada koonfurta, iyo sidoo kale Bartamaha Ruushka iyo gobolka Volga. Markii aan dooraneyno noocyo kala duwan, waxaan sidoo kale tixgelinnaa soo-saarka iyo soo-bandhigidda sheyga. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ula macaamilaa baradhada oo lacag noo keenta annaga iyo macaamiisheenaba, maxaa yeelay waxaan ku jirnaa isku silsilad. ”
"AgroAlliance-NN" waxay isku dayeysaa inay macaamiisheeda caadiga ah la shaqeyso, si nidaamsan.
“Aad ayey muhiim noogu tahay in baradhadayadu ay ku dhacdo gacanta xirfadleyda, in goosashada ay wanaagsan tahay, dadku faa iido ayey leeyihiin, sanadka dambe ayay mar labaad naloo soo jeedsadeen abuurka, - Dmitry Kabanov wuxuu sharxayaa mowqifkiisa. - Haddii xiriirka macaamiisha loo dhisi karo iyadoo loo eegayo qorshahan, shirkadda waxay sameyn kartaa istiraatiijiyad horumarineed muddo-dheer ah ”.
AgroAlliance-NN ku takhasusay waxay siinayaan taageero soosaarayaasha iibinta abuurka, wada tashiga ugu horreeya wuxuu bilaabmaa waqti dheer kahor wajiga abuuritaanka. “Xilliga qaboobaha, waxaan ka wada hadalnay saacado sida loo diyaariyo dhulka, sida loo beero. Guga waxaan ka faalloodaa geedo, ka dibna marka loo eego xilliga tagitaankeenna ayaa bilaabanaya - ayuu yidhi Dmitry Kabanov.- Run, sannadkan waxaan ku qasbanahay inaan wax isla xiriirno oo keliya muddo dheer..
Marka lagu daro xuduudaha gobollada xidhnaa guga, AgroAlliance-NN wali ma xalin dhibaatooyin kale xilligan xaadirka ah. Laakiin mustaqbalku wuxuu kiciyaa su'aalo badan.
“Hada way adagtahay inaan fahamno waxa dhici doona kadib masiibada- ayuu yidhi madaxa shirkadda. - Sidee beeraleydu u noolaan doonaan - macaamiisheena? Noocyo baradho noocee ah ayay dadka deggan dalka awood u yeelan karaan inay iibsadaan: dhaqo, xirxiran ama wasakh leh, badan? Xagee bay ka iibsan doonaan baradhada - suuqyada ama suuqyada waaweyn? "Sidee warshadaha guud ahaan uga badbaadi doonaan xilligan xaadirka ah maxaase dhici doona kan xiga?"
Isticmaalka baradhada ee adduunka ayaa hoos u dhacay, oo tani calaamad naxdin leh ayay u tahay qof kasta oo ku lug leh ganacsiga baradhada.
In kasta oo AgroAlliance-NN ay qorsheyneyso, dabcan, in la sii wado dhismaha. Weli waxaa jira wax badan oo loo qabto bilowga.
"Haddii aad rabto inaad si casri ah u maamusho, waxaad u baahan tahay inaad soo bandhigto tikniyoolajooyin wax ku ool ah oo wanaagsan- ayuu yidhi Dmitry Kabanov. - Gaar ahaan, waxaan ku dadaalnaa sidii aan u horumarin laheyn nidaamka kaydinta dhaqaalaheena, sanad walbana waxaan qaadnaa tilaabooyin aan ku wanaajineyno jihadaan ”.
Xilliga cusub, qalabka waraabka wuxuu bilaabaa inuu ka shaqeeyo beeruhu. Xaaladaha cimilada ayaa noqda kuwo aan la saadaalin karin sannad ka sannad, - maamulaha AgroAlliance-NN ayaa sharraxay go'aankan, - Waxaanna u aragnaa inay lagama maarmaan tahay in aan baradhadayada ka ilaalino abaarta suurtogalka ah ”.
Waxa jira hawlo kale oo degdeg ah iyo xalal. “Maxaa ii soo jiitay dhinaca beeraha- ayaa yidhi Dmitry Kabanov, - Marna ma imaan daqiiqad aad iska joojin karto oo aad ku oran karto wax walba waa hagaagsan yihiin. Had iyo jeer waxaa jira wax la sameeyo, halka lagu horumarinayo, oo kaliya kuwa aan ka cabsaneyn inay gacantooda ku duubtaan badbaadada.
Mowqifkan hogaamiyaha ah, dhaqaaluhu wuxuu leeyahay rajo weyn.
Anigoo ku hadlaya magaca tifaftirayaasha, waxaan u rajeyneynaa AgroAlliance-NN, iyo sidoo kale dhammaan dallaga baradhada ruushka, cimilo aad u wanaagsan, goosashada wanaagsan iyo qiimaha wanaagsan ee badeecadaha waaweyn. U ogolow xilli cusub inay adiga kuu shaqeyso sidoo kale intii suurogal ah.
Tags: "АгроАльянс-НН"2020 .2Gobolka Nizhny Novgorodbaradhada abuur
In kabadan 7000 hektar oo gobolka Chelyabinsk ah ayaa lagu beeray baradhada
Webinar "Teknolojiyadda kala duwan ee wax soo saarka beeraha HZPC. Iftiimin ku saabsan xilli sii kordhaya "